कोरोना संक्रमण र मुटुरोग बाट कसरि बच्ने ? - Himalayamail.com
– डा. माधव विष्ट , बरिष्ठ मुटुरोग बिशेषज्ञ
चिनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना( कोभिड-१९) , मार्च २०२० यता चिन भन्दा बाहिर को मुलुक मा बढि संख्यामा देखिएको छ र विश्वमै अहिले द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । कोरोनाले मुटुमा नराम्रो असर गर्ने र मुटु रोगीहरुलाइ अरु रोगीहरुको तुलनामा बढि मात्रामा रोगले सताउने र मृत्यु हुने विभिन्न अध्धयनले देखाएको छ ।
कोरोना भाइरस (सार्स कोभ) ले २००२ मा सार्स (SARS) गराएको थियो, (MERS-CoV) कोरोना भाइरस ले २०१२ मा (MERS) गराएको थियो भने अहिले आएर २०१९ मा (SARS CoV-2) कोरोना भाइरस ले COVID-19 गराएको भेटिएको छ ।
(SARS CoV-2) कोरोना भाइरस COVID-19 कहा बाट आयो भन्ने कुरा मा अहिले सम्म कुनै यकिनले भन्न सकिने ठाऊ छैन । कसैले भन्छन्न चमेरो बाट कसैले भन्छ्न्न वुहान्को ल्याब बाट निस्किएको भनेर !
कोरोना भाइरस COVID-19 ले कसरी संक्रमण (इन्फेक्ट) गर्छ ?
कोरोना भाइरस हाम्रो शरिर को ACE2 Receptor मा टासिने गर्दछ । यो Receptor हरु फोक्सो, मुटू, आन्द्रा, रगतको नलि र किड्नि मा हुन्छन । अनि मुटु र रगतको नलि मा टासिए पछि हाम्रो शरिर को inflammatory सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ, त्यसपछि रक्तचाप बढ्ने, मुटुको रगतको नलि मा बोसो बढ्ने, बिधुतिय गड्बडि हुने, मुटुको मासु मर्ने र मुटु फेल हुन पुग्छ । अन्त्यमा ‘इन्फेक्सन’ फैलिएर सबै अङ्गमा असर पुगे पछि ‘मल्टि अर्गान फेलर’ (सबै अङ्गले काम गर्न छोड्नु) हुन पुग्छ र मान्छेको मृत्यु हुन्छ ।
कोरोना भाइरस COVID-19 का लक्षणहरु :
हात मिलाउनाले सबैभन्दा चाडै एक ब्यक्ति बाट अर्कोमा सर्ने गर्छ। त्यसपछि हाछ्यिउ गर्दा र खोक्दा ।
लक्षण भएका र नभएका दुबै थरिका ब्यक्तिबाट सर्न सक्छ । लक्षण देखिने समय अबधि ४-५ दिन हो तर २-३ हप्ता पनि लाग्न सक्छ । लक्षण देखिने समय अबधि ४-५ दिन हो तर २-३ हप्ता पनि लाग्न सक्छ । कहिले काहि यस रोगमा मान्छेलाई थाहा नै नपाई रोग लागिसकेर निको पनि भैसक्छ। अध्ययन अनुसार, ज्वरो र सुख्खा खोकि नै सुरुवाति मुख्य लक्षण हुन । नाकबाट पानी बग्ने हुदैन तर कहिलेकाही वाक वाक लाग्ने, पखाला हुन सक्छ । समस्या जटील हुदै गए पछि जटील निमोनिया को लक्षण देखिदै जाने गर्दछ । उमेरको हिसाब ले मृत्युदर पनि घट्बढ हुने गरेको पाइएको छ । ५० वर्ष कम उमेरमा १% मृत्यु दर , ५० मा १ देखि ३%, ६० वर्ष को मा ३ देखि ६% , ७० वर्ष मा ८% र ८० वर्षको आसपासमा ८ देखि १४ % रहेको पाइएको छ । र अन्य रोग भएको अबस्था मा अनि रोगको किसिम अनुसार मृत्यु दर फरक फरक देखिएको छ । मुटुरोगी हरुमा १० देखि १५ % , सुगरका रोगीहरुमा ७ देखि १३ % दम् का मा ६ देखी १३ %, रक्तचाप का मा ६ देखि १० % र क्यान्सर मा ५ – ६ % पाइएको छ ।
मुटुको मासुमा क्षती :
चिनमा गरिएको को एक अध्ययन अनुसार, ४६२४८ जना कोरोना सङ्क्रमित मा (17±7)% उ्च्च रक्तचाप का बिरामीहरु, (8±6) % सुगर का बिरामीहरु, र (5±4)% मुटुका बिरामीहरु रहेका छ्न ।
यस्तो प्रकारको सम्बन्ध को कारण हुनुमा बढ्दो उमेर, रोगसङ्ग लड्ने छ्मता को कमि , ACE2 Receptor बढि मात्राम पाइनु र रोगीहरु को समपर्कमा आउनु आशङ्का गरिएको छ ।
कोरोनाले मुटुमा कसरि मुटुको मासुलाई नस्ट गरी मुटु कम्जोर बनाउछ भन्ने एक्ज्याक्ट तरिकाको बारेमा अहिले सम्म अनि अध्ययन भइनैरहेको छ । बिस्वस्निय र भरपर्दो तरिका चाहि ACE2Receptor को माध्यम बाट , अक्सिजन को कमि भई Cytokine स्त्रोम ले गर्दा मुटु फेल हुने गरेको पाइएको छ ।
– डा. माधव विष्ट
नेशनल हार्ट सेन्टर सिंगारपुर (एनएचसिएस)
हाल नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल
टिकटकमार्फत चीनले तथ्यांक संकलन गरेको आशंका : भारतपछि अमेरिका प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा